VaChinamasa Voomesa Musoro kuMusangano kuGeneva
Masangano akazvimirira ega munyika anoti ari kutsvaga kunzwa kumapato ese matatu ari mudare reparamende kuti sei gurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, vakaudza musangano we United Nations Working Group uri kuitirwa ku Geneva kuti hurumende haina tarisiro yekuvandudza mitemo yePublic Order and Security Act, POSA, pamwe ne Access to Information and Protection of Privacy Act, AIPPA, asi iwo mapato aya ainge akabvumirana kuti mitemo iyi inofanira kuchinjwa.
Va Chinamasa vakaudza musangano uyu kuti hurumende inogutsikana nemitemo iyi. Vachisvitsa gwaro ravakati ndere hurumende kumusangano wekutarisa nyaya dzekodzero dzevanhu uri kuitirwa mu Geneva, kuSwitzerland neMuvhuro, VaChinamasa vakati kuvepo kwemitemo miviri iyi kwakabva mukubvunzurudza kwakadzama muZimbabwe pamwe nekunyika dzakaita seUnited Kingdom, Australia neUnited States.
Vakati havawirirane nemaonero ekuti mitemo iyi inombunyikidza kodzero dzevanhu, vachitiwo mitemo yakadai iri munyika dzakawanda asi havasati vambonzwa dzichishoropodzwa.
Mukuru we Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Muzvare Irene Petras, vaudza Studio7 kuti nyika haingaiti sarudzo itsva mitemo iyi ichiripo.
Mutevedzeri wemunyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko mu MDC-T, Muzvare Tabitha Khumalo, vanoti bato ravo harisi kuzopinda musarudzo zvinhu zvisina kugadziriswa.
Mukuru we Crisis in Zimbabwe Coalition, Va Mcdonald Lewanika, avo vari ku Geneva kumusangano we United Nations Working Group, vanotiwo masangano akazvimirira ega haasi kufara nezvaitwa naVa Chinamasa ku Geneva zvekuramba kutambira zvimwe zvisungo zvabuda pamusangano wekuGeneva.
Hurukuro naVa McDonald Lewanika